အမလေး ….. အိမ်မှာသာ ကိုယ်စားမယ့်ထမင်းကိုယ်ခူးမစားတာနော်။ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အသားကုန်ချက်တာချက်တာဆိုတာ အိုးကပ်မှာစိုးလို့ ….
ဟော့ပေါ့ဆိုတဲ့အသံကို ကြားလိုက်တာနဲ့ မနေနိုင်၊ မထိုင်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရှိလားရှင့်။ အားလုံးလည်း ဟော့ပေါ့နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီဆိုတော့ ဒီနေ့မှာ ဟော့ပေါ့ကို ဘာကြောင့်ပုံမှန်စားပေးသင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်…..။
၁။ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို အဆင်ပြေတယ်။
သင်က အစပ်ကြောက်တဲ့သူလား၊ ဒါဆိုဟင်းရည်ကို အစပ်မဟုတ်ဘဲ အချိုပဲပေး။ အရမ်းစပ်တာမို့မစားနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းချဥ်ချဥ်စပ်စပ်လေးတော့ စားချင်တယ်၊ အိုကေ …. ဒါဆိုရင် မာလာအရသာဟင်းချိုလည်းရှိတာပဲဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးလား။ အသားမစားလို့၊ အရွက်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အဝစားဆိုင်တွေမှာ အသားမှအသားတန်အောင်စားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အရာအားလုံး အဆင်ပြေပြီးသားပါ။
၂။ လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။
အချို့တွေက အခြားသူတွေနဲ့ အတူတူ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ရင် ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟော့ပေါ့မကြာခဏ စားပေးနေရင်တော့ ဒီလိုမျိုးတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့အိုးထဲကို စားစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်မယ်။ ပြီးရင် သေချာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ရင်း စကားတွေပြောမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူသွားစားရင်လည်း ကိုယ့်ဆီကဟာ သူယူစား၊ သူဆီကဟာ ကိုယ်ယူစားနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်လေခြင်းပဲလေ။
၃။ စားစရာသောက်စရာအတွက် ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်လာတယ်။
အမလေး ….. အိမ်မှာသာ ကိုယ်စားမယ့်ထမင်းကိုယ်ခူးမစားတာနော်။ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အသားကုန်ချက်တာချက်တာဆိုတာ အိုးကပ်မှာစိုးလို့၊ ခေါက်ဆွဲတွေပွကုန်မှာစိုးလို့၊ အရွက်တွေနွမ်းကုန်မှာစိုးလို့၊ ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ ပါးစပ်ကလည်း တဖူးဖူးနဲ့မှုတ်လိုက်သေး၊ လက်ကလည်း ဟော့ပေါ့အိုးကြီးကို မွှေလိုက်သေးနဲ့ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ ကြိုးစားနေတာများ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး။ ဒီတော့ အိမ်မှာလည်း အမေအပြင်သွားလို့ စားစရာမရှိရင် ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ဖို့ အတွေ့အကြုံကောင်းရသွားတာပေါ့။ ဒါတောင် Delivery ကမှာစားချင်စားဦးမှာလေ။
၄။ အချဥ်ရည်က အသက်။
ဟော့ပေါ့စားတဲ့အခါမှာ တချို့ဆိုင်တွေက စပ်ပြီးသားအချဥ်ကို လာချပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက ဟော့ပေါ့စားပြီဆိုတာနဲ့ အချဥ်ရည်ကို ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျရောစပ်ပြီး စားရတာကို သဘောကျတာပါ။ ပြီးရင် အတူတူလာစားတဲ့သူအချင်းချင်း “ငါဖျော်တဲ့အချဥ်ရည်က ပိုကောင်းတယ်၊ နင်ဖျော်တဲ့အချဥ်ရည်က ပိုကောင်းတယ်။” ဆိုပြီး ပြိုင်ကြသေးတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ အချဥ်ရည်ဆို ကိုယ်တိုင်မစပ်ဘဲ၊ ဘယ်သူစပ်ပေးစပ်ပေး ဂုန်းထိုင်ဆင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်တော့ အဖွဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းပါစမြဲပဲ။ အခုတော့ ကိုဗစ်ကြီးကြောင့် ဒါတွေအားလုံးကို လွမ်းနေရပြီ။
အဝစားဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင် ကိုယ်က နည်းနည်းလေးပဲစားစား၊ များများပဲစားစား ဒါကိုယ့်အပိုင်းပဲလေ။ များများစားနိုင်တယ်ဆိုလည်း ကိုယ်ကတန်တယ်။ နည်းနည်းပဲစားနိုင်တယ်ဆိုလည်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ပဲ ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဟယ်ပေါ့။ Item တစ်ခုချင်းစီကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရတဲ့ဆိုင်တွေဆိုလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အရေးကြီးတာက အရသာကောင်းတဲ့ ဟော့ပေါ့စားရဖို့ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
မိုးလေးအေးအေးနဲ့ ဟော့ပေါ့လေးစားလိုက်ရရင်ဆိုပြီး တောင့်တခဲ့ဖူးတယ်မဟုတ်လား၊ မလိမ်ဘဲ မှန်မှန်ဖြေနော်။ ဆောင်းရာသီမှာလည်း ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဟော့ပေါ့စားရဦးမှာပဲလေ။ အို …. နွေရာသီမို့လို့ ပူတယ်ဆိုလည်း ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေက အဲကွန်းတပ်ထားတာပဲ၊ ဘာနေနေ ဟော့ပေါ့စားရဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်လေ။
၇။ အိမ်မှာလည်း အလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်တယ်။
အခုဆို ဆိုင်တွေပိတ်ထားလို့၊ ဝယ်ရပြုရမလွယ်လို့ဆိုပြီး ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဟော့ပေါ့ငတ်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်လို့ပါ။ အဲ့ဒါများအရင်ကဘာလို့ဆိုင်သွားစားနေလဲဆိုရင်တော့ ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မြိန်ရေယှက်ရေစားရင်း အဆင်လေးတွေကို ငမ်းရတဲ့အရသာကို တပ်မက်လို့ပေါ့ရှင်လို့သာဖြေလိုက်ပါတော့နော်။